Nhau - Chengetedzo mukushandiswa kwemabhegi emvura ekunze
Kuchengetedza mukushandiswa kwemasaga emvura ekunze
Bhegi remvura rakagadzirwa neisiri-chepfu, risingaravike, rakajeka uye rakapfava latex kana polyethylene jekiseni rekuumbwa, Makona matatu ebhegi remvura muviri ane maziso ehomwe, anogona kupfekwa nemapfundo kana mabhandi.Pakufamba, inogona kutakurwa yakatwasuka, yakatwasuka kana pabhandi.Zviri nyore kuzadza mvura, zviri nyore kunwa, uye zvakapfava uye zvakasununguka kutakura.Mabhegi emvura ekufambisa anogona kushandiswa kakawanda.Iyo muromo webhegi remvura yakakosha zvikuru.Izvo zvinodiwa kuvhura uye kuvhara nyore, neruoko rumwe kana mazino.Mabhegi emvura anofanira kunge akachengeteka uye asina chepfu pakutanga.
Kana bhegi remvura rikasashandiswa kwenguva yakareba, rinogona kukura ukuru.Kana ichida kusiiwa isina basa kwenguva yakareba mushure mekushandisa kwega kwega, ndapota inyika mumvura ine munyu kwemaminetsi akati wandei wobva waomesa zvawo.Isa desiccant mairi.
Kana chakuvhe chakura, unogona kushandisa nzira inotevera:Shandisa isina kwayakarerekera detergent mhinduro isina maokisijeni,
Bvisa pombi, bhegi uye nozzle (dzosa jasi rekunze rakasvibirira remuromo kuti ubvise iyo yero yemukati mukati meiyo yemukati layer) wonyura mumhinduro yekugezesa kwemaminetsi mashanu;Shamba nemvura;Dzokorora kusvikira wakachena.Kana chubhu yacho yanyanya kusvibiswa, shandisa waya-yakaputirwa nedonje bhora bhurashi, uchichenjerera kusaboora purasitiki.
Mabhegi emvura anogona kuomeswa nechando zvakananga, asi hafu izere.LIDS nemapombi hazvigone kuomeswa nechando.Chenjerera kudzivirira mabhegi kuti asanamatira mufiriji.
Dzivisa chero zvinhu zvakaoma.
Inogona kushandiswa kugadzira chivharo chemhino, chengetedza muromo wakachena uye kudzivirira mvura netsaona.
Edza kudzivisa zvinwiwa uye mvura chete.
Mugaba: Bhegi remvura richiri kubatsira here kana rakatyoka?Chokwadi zvinoshanda.Cheka zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvepamusoro uye gadzira mbiya pamwe chete nezvimwe zvemangwanani kana kudya kwemanheru.
Bhodhoro: Ungada kuuya newaini here?Hapana chigadziko chakareruka kupfuura bhegi remvura.
Chivharo chisingapindi mvura: isa mepu, teresikopu kana kamera diki mubhegi remvura, vhara bhegi remvura, zvakanaka seinzira isina mvura!
Cold compress: Isa bhegi risina mvura rechando, chando, kana mvura yerwizi inotonhora kunzvimbo yakakanganiswa kuti ikurumidze kupora kubva.tsinga dzetsandanyama, sprains, kana mavanga.
Ita kuti tende rako riwedzere kugadzikana: Zadza bhegi nechando, zviputire, sunga bhegi kune rumwe rutivi rwetambo, sunga rumwe rutivi padanda, uye uvige bhegi mukati mechando kuti uchengetedze tende rako.
Nguva yekutumira: May-27-2022